महिलाका लागि किन बनेन भिएग्रा ?
महिला मानसिक रूपमा अलिकति पनि उत्तेजित नभई शारीरिक रूपमा उत्तेजित हुन सक्छन्। उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक यौन उत्तेजनाबीच पातलो सम्बन्ध हुन्छ। त्यसैले भिएग्राजस्ता शारीरिक उत्तेजक औषधि महिलालाई काम लाग्दैन।
यौनेच्छाले मानिसको जीवनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। तपाईं आफूबारे के सोच्नुहुन्छ ? तपाईंमा भएको कामेच्छाको मात्राले यसको उत्तर निर्धारण गर्छ। कामेच्छालाई लिएर अनेकौँ सामाजिक विश्वास र अपेक्षा हुन्छन्। मानिसले कति पटक यौन सम्पर्क राख्नुपर्छ ? अथवा, मानिसमा यौन चाहना कति हुनुपर्छ ? यस्ता प्रश्नमा एउटा अघोषित मापदण्ड तोकिएको हुन्छ। त्यही मापदण्ड पूरा गर्न मानिसले यौन चाहना र क्षमता बढाउने विभिन्न उपाय खोजी गर्दै आएको छ।
त्यस्ता कतिपय उपायले वास्तवमै काम गर्छन् भने कतिपय हास्यास्पद हुन्छन्। यो क्रम प्राचीन समयदेखि हालसम्म जारी छ। चौधौँ शताब्दीमा एसियाबाट युरोप पुगेका मसलाले श्वेतहरूको यौन चाहना बढाउन भूमिका खेलेको थियो। त्यस्तै, सोह्रौँ शताब्दीमा आलु खाँदा यौन क्षमता बढ्ने विश्वास गरिन्थ्यो। अठारौँ शताब्दीमा लिंगाकृतिसँग मिल्दोजुल्दो आकारका खाद्य पदार्थमा यौनशक्ति लुकेको विश्वास गरिन्थ्यो। खास गरी, गाजर, सजिवन तथा अण्डकोष आकारका लसुन, प्याज, स्याउ आदि यौनशक्तिवद्र्र्धक हुने विश्वास थियो।
मेक्सिकोको एज्टेक परम्परामा चकलेटलाई कामोद्दीपक खाना मानिन्थ्यो। सन् १९८० को दशकमा आएर चकलेटमा यौन उत्तेजना बढाउन सघाउने फेनाइल इथाइलामाइन नामक रसायन हुने निष्कर्ष अनुसन्धानकर्ताले निकाले। तर, उक्त रसायन अत्यन्त कम परिमाणमा मात्रै हाम्रो शरीरले चकलेटबाट लिन सक्छ।
कामेच्छा आफैँमा जटिल विषय हो। यसका दुई पक्ष हुन्छन्। शारीरिक र मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक पक्ष यौनको चाहनासँग सम्बन्धित छ भने शरीरिक पक्ष उत्तेजनासँग सम्बन्धित। ‘धेरै मान्छेलाई यौन चाहना र उत्तेजना फरक हो भन्ने थाहा हुँदैन,’ यौन स्वास्थ्य विज्ञ लोगान लेभकोफ भन्छिन्, ‘यी दुई पक्षबीच सधँै तालमेल नमिल्न सक्छ।’ कहिलेकाहीँ त्यति धेरै यौन चाहना नहुँदानहुँदै पनि मानिसहरू शारीरिक रूपले उत्तेजित हुन पुग्छन्। कहिलेकाहीँ अत्यधिक यौन चाहना हुन्छ, तर उनीहरूलाई शरीरले साथ दिँदैन। तर, यसो हुनु स्वाभाविक भएको लेभकोफको भनाइ छ। अर्थात्, यौनेच्छाको कुनै निश्चित मापदण्ड छैन। हरेक व्यक्तिको शरीर र मनोविज्ञान फरक–फरक हुन्छन्।
तर, अधिकांश मान्छेलाई भ्रम छ। धेरैलाई लाग्छ, कामेच्छाको एउटा आदर्श मानक छ। थुप्रै पुरुषलाई के लाग्छ भने ‘मर्द’ हुनु भनेको जति बेला पनि यौनक्रीडाका लागि शारीरिक र मानसिक रूपले तम्तयार हुनु हो। त्यसैले नै प्राचीन कालदेखि नै पुरुषले कामेच्छा बढाउने उपायको खोजी गरिरहेका छन्।
तर, सामाजिक अपेक्षामा आफूलाई ढाल्ने प्रयासले वास्तवमा व्यक्तिको आत्मविश्वासमा क्षति पुर्‍याइराखेको हुन्छ। यसले सम्बन्धमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ। खासमा यौन चाहना बढाउने गलत तरिका अपनाए त्यसले अझ घटाउने जोखिम हुन्छ। ‘यौन चाहना नहुनु भनेको तपाईंमा कुनै गडबडी छ भन्ने होइन,’ लेभकोफ भन्छिन्, ‘तपाईं यो विषयमा बढी चिन्तित हुनुहुन्छ भने यसले जीवनमा अझ नकारात्मक असर पुर्‍याउन सक्छ।’
महिला र पुरुषमा यौन चाहना
महिला र पुरुषको यौनेच्छा फरक हुन्छ। महिलाको भन्दा पुरुषको यौनेच्छा सशक्त र सीधा हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन्। यौनका बारेमा पुरुषहरू बढी सोच्ने गर्छन्। ६० वर्षमुनिका अधिकांश पुरुष कम्तीमा दिनको एक पटक यौनका बारेमा सोच्छन्। तर, महिला भने एक चौथाइले मात्रै त्यसरी सोच्छन्। यौनको खोजी र पहल पनि पुरुषले ज्यादा गर्छन्। समलिंगीमा पनि महिला समलिंगीभन्दा पुरुष समलिंगीले बढी यौन सम्पर्क राख्छन्। दुईतिहाइ पुरुषले हस्तमैथुन गर्छन् भने महिलामा यो संख्या ४० प्रतिशत मात्र छ। ब्रह्मचर्य धारण गरेका भिक्षु–भिक्षुणीमा पनि पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी पालना गर्छन्।
यौनेच्छाको कमीलाई मानिसले अनेक तरिकाले अथ्र्याउने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा पार्टनर र आफ्नो यौनेच्छाको मात्रामा तालमेल नमिल्दा अप्ठेरो पर्न सक्छ। धेरैले यसलाई पार्टनर आफूतिर आकर्षित नभएको अर्थमा लिन्छन्।
तर, ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो भने मानिसको यौनेच्छामा परिवर्तन भइरहन्छ। कुनै रोग वा औषधिको प्रभावले घटबढ हुन सक्छ। अनेकौँ अध्ययनले सुझाएअनुसार यौनेच्छालाई सबैभन्दा धेरै असर गर्ने पक्ष भनेको तनाव हो। सामान्यतः जति धेरै चिन्ता भयो, त्यति नै कम यौनेच्छा हुन्छ। उमेर ढल्किँदै जाँदा, शरीर परिवर्तन हुँदै जाँदा पनि यौनेच्छामा कमी आउँदै जान्छ। खास गरी, महिलाहरूमा महिनावारी रोकिएपछि यौनांगको तन्तु फेरिन थाल्छ। परिणामतः यौन सम्पर्क राख्दा उनीहरूलाई पीडा हुन थाल्छ। यही पीडाका कारणले पनि उनीहरूमा यौन चाहनाको कमी हुन जान्छ। त्यस्तै, मानिसहरू यौन चाहनालाई चरमानन्दसँग जोडेर हेर्ने गल्ती गर्छन्। यौन चाहना हुँदैमा तपाईंको शरीरले चरमानन्द प्राप्त गरिहाल्छ भन्ने छैन।
त्यसमाथि सामाजिक रूढीले पनि यसमा असर पारेको हुन्छ। ‘पुरुष जहिल्यै यौन मात्रै चाहन्छ, महिलाहरू यौन सम्बन्धबाट बच्न चाहन्छन्, महिलामा यौन चाहना बढी हुनु अस्वाभाविक हो’ भन्नेजस्ता सोचले पनि मानिसको यौन जीवनमा धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ।
किन बनेन महिलाका लागि भिएग्रा ?
पुरुषका लागि यौनउद्दीपक भिएग्रा सन् १९९८ देखि बजारमा आएको हो। गएको २० वर्षमा संसारका ६ करोड २० लाख पुरुषले यसको प्रयोग गरेका छन्। अमेरिकी सेनाले मात्रै ४ करोड १६ लाख डलरको भिएग्रा खरिद गर्छ। सन् २०१२ यता अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा मात्रै १.४ अर्ब डलरको यो औषधि खपत हुन्छ। भिएग्रा संयोगवश आविष्कार भएको थियो। भिएग्रामा रहेको सिल्डेनाफिल औषधि मुटु रोगको उपचार गर्न आविष्कार भएको थियो।
पुरुषको तुलनामा महिलामा अत्यधिक यौन गुनासो हुने गरेको छ। थुप्रै तथ्यांकले देखाएअनुसार ४० देखि ५० प्रतिशत महिलामा यौनसम्बन्धी गुनासो हुन्छ। तैपनि महिलाका लागि भिएग्रा विकसित भएको छैन। किन त ?
धेरै पुरुष उत्तेजित हुनासाथ मानसिक रूपमा पनि यौनक्रियाका लागि तयार हुन सक्छन्। पक्कै पनि बीसेबाइसे ठिटा र ५०–५५का प्रौढको तुलना हुन सक्दैन। उमेरले यौनको आनन्द कम गराउन सक्छ। यस्तै बेलामा उत्तेजना बढाउने औषधि काम लाग्न सक्छ। भिएग्राजस्ता औषधिले अलिअलि भएको यौन उत्तेजनालाई ह्वात्तै बढाइदिन्छ। अर्थात्, यस्तो औषधिले मानिसको शारीरिक उत्तेजना र मानसिक चाहनाको तालमेल गराइदिन्छ।
तर, महिलाको यौनिकता फरक हुन्छ। महिलाहरू मानसिक रूपमा अलिकति पनि उत्तेजित नभई शारीरिक रूपमा उत्तेजित हुन सक्छन्। अर्को शब्दमा भन्दा महिलामा शारीरिक र मानसिक यौन उत्तेजनाबीच पातलो सम्बन्ध हुन्छ। अर्थात्, तपाईंमा यौन चाहना नहुँदा पनि तपाईं शारीरिक रूपमा पूरै उत्तेजित हुन सक्नुहुन्छ। त्यसैले भिएग्राजस्ता शारीरिक उत्तेजक औषधि महिलालाई काम लाग्दैन। थुप्रै औषधि निर्माताले महिलाका लागि भिएग्रा बनाउने प्रयास गरे। तर, तिनले काम गरेनन्। पुरुषका लागि बनेको भिएग्राले यौनांगमा रक्तप्रवाह बढाइदिन्छ। तर, महिलाका लागि भिएग्रा भनेर प्रचारित गरिएको औषधि फ्लिबेनसरिनले दिमागमा रसायनको सन्तुलन मिलाएर यौन उत्तेजना बढाउनुपर्छ। खास गरी, महिनावारी नरोकिएका महिलामा यौनेच्छाको कमीको उपचार गर्न यो औषधि आविष्कार गरिएको हो। तर, यो औषधि शतप्रतिशत प्रमाणित भइसकेको छैन। त्यस्तै, यसका साइड इफेक्ट पनि धेरै छन्। यो औषधिलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकृत गरे पनि अन्य थुप्रै देशमा यसलाई स्वीकार गरिएको छैन।
यौनेच्छा बढाउने प्राकृतिक उपाय
कम यौनेच्छा हुनु आफैँमा कुनै समस्या होइन। तर, यसले दैनिकीमा दक्खल पुर्‍याउन सक्छ। खानपान र दैनिकीमा सुधार गरेर यौनेच्छा बढाउन पनि सम्भव छ। यद्यपि यो व्यक्तिपिच्छे फरक पर्छ। यौनेच्छा बढाउने केही प्राकृतिक तरिका यस्ता छन् ः
तनावलाई यौनेच्छाको शत्रु मानिन्छ। त्यसैले तनाव घटाउने जुनसुकै उपायले पनि यौन स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। व्यस्त कार्यतालिका, सम्बन्धमा खटपट, चिन्ताजस्ता समस्याले पुरुष र महिला दुवैलाई उत्तेजित हुन दिँदैन। डिप्रेसनका कारण थुप्रै पुरुषमा ‘इरेक्टाइल डिसफंक्सन’को समस्या हुन्छ। यसलाई सुधार गर्न राम्रो निद्रा, नियमित कसरत, स्वास्थ्यवद्र्धक खाना आदिले सघाउन सक्छन्।
पार्टनरसँगको सम्बन्धको कुनै न कुनै बिन्दुमा धेरै व्यक्तिले यौन आकांक्षा गुमाउँछन्। एउटै पार्टनरसँगको लामो सम्बन्धमा रहँदा आपसी न्यानोपन कम भएको महसुस धेरैलाई हुने गर्छ। उनीहरूबीचको अन्तरंगतामा कमी आउँछ। त्यसैले आपसी सम्बन्धलाई नवीकरण गरिरहनुपर्छ। ऊर्जा भरिरहनुपर्छ। त्यसका लागि घुम्न जाने, घरबाहिरका क्रियाकलापमा साथै जाने, खुला कुराकानी गर्ने र एकअर्काको भावनालाई बुझ्ने तथा सम्मान गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ।
निद्रा र खाना
निद्रा नपुगे सबैथोक धमिलो हुन पुग्छ। शारीरिक उत्साह हुँदैन। त्यसैले निद्राको कमीले कामेच्छामा ठूलो असर पार्छ। सन् २०१५ मा गरिएको एक अध्ययनअनुसार राति राम्ररी सुतेका महिलामा बढी यौनेच्छा पाइएको थियो।
त्यस्तै, पोषिलो खाना पनि स्वस्थ यौनजीवनका लागि अत्यन्त आवश्यक छ। मुटुको रोग र अन्य रोगले पनि यौनेच्छा घटाउन सक्छन्। पर्याप्त फलफूल, तरकारी, सुगर कम र प्रोटिन ज्यादा भएका खानाले यस्ता रोग लाग्न दिँदैनन्। ओखर, बदाम, एभोकाडो, बेरी खानाले यौनजीवन स्वस्थ राख्न मद्दत पुग्छ। धूम्रपान र मद्यपान छोड्नु राम्रो हुन्छ। यौनक्षमताबारे अनेकौँ मिथकमध्ये खास गरी रक्सीले यौनक्षमता बढाउने विश्वास गरिन्छ। वास्तवमा अल्कोहलले ठीक उल्टो असर गरिरहेको हुन्छ।
नियमित कसरतले धेरै फाइदा हुन्छ। कसरतले मुटु रोगीमा पनि यौनजीवन फर्केको सन् २००५ को एक अध्ययनले देखाएको थियो। कसरतले अन्य रोग लाग्न दिँदैन। त्यसले कामेच्छामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। तौल नियन्त्रण पनि उत्तिकै आवश्यक छ। थेरापी पनि सहयोगी हुन सक्छ।
यीबाहेक ग्रिन टी सेवन, पौडी, मसाजले पनि कामोद्दीपकको भूमिका खेल्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्। रोचक त के छ भने हरर मुभीले पनि भिएग्राको काम गर्न सक्छ। डरका कारण एड्रेनालाइन नामक हर्मोन बढ्छ। यसले यौनेच्छा बढाउँछ।